ICT ရဲ့ like 200k ပြည့် အထူးအစီအစဉ် ကံထူးသူများ ~ The ICT.com.mm Blog
ICT ရဲ့ like 200k ပြည့် အထူးအစီအစဉ် ကံထူးသူများ
ICT ရဲ့ Like နှစ်သိန်းပြည့် အထူးအစီအစဉ် အနေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အမှတ်တရ မေတ္တာလက်ဆောင်ကံထူးရှင်တွေကို ဒီကနေ့ ဖွင့်ဖောက်ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၆-၉-၂၀၂၀ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)က ICT ရဲ့ အထူးအစီအစဉ် ဗီဒီယိုဖိုင် post အောက်မှာ ပါဝင် comment ရေးပြီး Page Like & Share ပေးခဲ့ကြသူတွေထဲက ကံထူးရှင်တွေကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ မဲပေါက်တဲ့ကံထူးရှင်တွေကို ICT က Like နှစ်သိန်းပြည့်အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေ ပေးအပ်သွားမှာပါ။
Comment ပေးကြတဲ့ account ပိုင်ရှင်ထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်နဲ့မညီတဲ့ comment တွေကိုတော့ ထည့်သွင်းမဲဖောက်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
အခုကြေညာလိုက်တဲ့ ကံထူးရှင်တွေအနေနဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်များကို ICT.com.mm နဲ့ Facebook messenger ကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ထုတ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ကံထူးရှင်စာရင်းရဲ့ နံပါတ်စဉ်များကတော့ အဲဒီပို့စ်မှာ ဝင်ရောက် Comment ရေးကြတဲ့ စည်းကမ်းချက်များနဲ့ကိုက်ညီသူ Account ပိုင်ရှင်တွေဆီ ICT က reply ပြန်ပြီး နံပါတ်စဉ်တပ်ထားတဲ့ serial number တွေများဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီပို့စ်အောက်က မိမိတို့ Comment Box တွေရဲ့ နံပါတ်စဉ်များနဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Comment Number / Account Name / Lucky Draw Item
1. Than Win Thu – Foomee Dual USB Charger
2. Julias Yi – Ugreen Hard Drive Adapter
3. Xiao Wei Er – Foomee Bluetooth speaker
4. Bing Icee(Chuu Myat Shwe Sin) – Team Group USB 183 drive 32 GB
5. Wai Yan – SP Power Bank
6. Livvie Chan – Foomee Wireless Earphone
8. Aye Aei Aei Aung – Foomee Bluetooth Headset
10. Nandar – Foomee Gamaing Type C fast charging
11. Chaw Rupar Aung – Energizer Power Bank
12. Min Nay Win Tun – Energizer Power Bank
13. Ywae Nu Thwe – Foomee wired Headset
14. Nan Myat Win Zaw – Team Group 193 USB Flash Drive 32
15. Ko Set Pai – Ugreen Male to Male cable
16. Myint Myint Aung (eco) – Ugreen Switch for remote control output
17. Nan Myat Win Zaw – Foomee Car Holder
18. Moonbarki Lay – Ugreen Cable Orgainzer
19. Ingyin Khaing – Energizer Power Bank
21. Ma Khin San – Energizer Power Bank
23. သီရိ – SP 32 GB Flash Drive
26. Oak Kar – Foomee Car Charger
28. Ma Khin San – Ugreen Headset Adapter
31. Kyu Kyu – Razer Mouse and Mouse Mat Bundle
32. Susu Latyar – Logitech Wireless Mouse
34. Htet Aung Hlaing – Car Charger
35. Hein Minn Thant – Logitech Wireless Mouse
36. Yadanar Sint – Logitech Mouse
37. Teacheal Ni – Thermometer
38. Hnin Pwint Zaw – Energizer Power Bank
39. Zaw Thura Oo – Ugreen Printer Cable
40. Wai Yan – Energizer Power Bank
41. Sai Min Naing – Targus Numeric
42. Thu Thu Lynn Htet – Ugreen Sound box cable
43. Love – Foomee Power Bank
44. Myat Min Khant – Energizer Power Bank
45. Ye XtEt AuNg – Foomee Charger Kit
46. Daw Pyae Phyo Khaing – Targus Numeric
48. Chan Myae Thu – Ugreen USB c to mircobcable
50. Nay – Energizer Power Bank
53. Ma Nilar Oo – Energizer Power Bank
55. Pyae Noe – Ugreen Mircor USB Male cable
56. Su Dar Le – Ugreen Adustable Portal Stand
57. Mi Sarah – Google Chromecast
58. Shwe Zin Phyu – Wall Charger
59. Aye Chan Phyu – Energizer Power Bank
Like ၂ သိန်း ပြည့်အောင် Likes တွေ အများကြီး ပေးခဲ့ကြသူတွေ၊ ဒီအစီအစဉ်မှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သူတွေအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Newer Gaming Gift Cards မျိုးစုံကို ICT.com.mm မှာ ရနေပြီနော်။
Older အဆင့်မြင့် Beer, Wine & Spirits မျိုးစုံ